Raw RAD140 (Testolone) ntụ ntụ (1182367-47-0) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / SARMS / RAD140 (Testolone) ntụ ntụ
5.00 si 5 dabere na 2 ahịa Fim
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gram na usoro nhazi nke RAD140 (Testolone) ntụ ntụ (1182367-47-0), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
RAD140 (Testolone) uzuzu uzuzu
Raw RAD140 (Testolone) ntụ ntụ isi agwa
aha: RAD140 (Testolone) ntụ ntụ
Molekụla Formula: C20H16CIN5O2
Ọbara arọ: 393.826
agba: ọcha crystalline ntụ ntụ
Raw RAD140 (Testolone) uzuzu eji eme ihe na steroid
Raw RAD140 (Testolone) ntụ ntụ aha
RAD140 ntụ ntụ bụkwa aha dị ka Testolone ntụ ntụ (CAS 1182367-47-0).
Raw RAD140 (Testolone) ntụ ntụ eji
Ntughari nke RAD140 / Testolone dị iche iche na-agbanwe site na 20-30mgs kwa ụbọchị, oge nhazi oge kachasị mma bụ 12-14weeks.
Ịdọ aka ná ntị na ụrọ Testolone
Otu n'ime akụkụ kachasị mma nke RAD140, na SARMS n'ozuzu ya, bụ enweghị mmetụta dị n'akụkụ, na-eme ka ha bụrụ ụfọdụ n'ime ọgwụ ndị kachasị mma na-arụ ọrụ (PED) ụbọchị ndị a.
Raw RAD140 ntụ ntụ ntụziaka ndị ọzọ
N'ụzọ ezi uche dị na ya, testolone nwere ike inyefe onye na-eme egwuregwu n'emeghị uru dị egwu na-ahụ na steroid steroids na anabolic. N'ihe na-emekarị, testolone ga-abawanye na ike na ike. N'ihi ya, RAD140 ga-abụ nnukwu mgbakwunye na usoro ọ bụla, ebe ọ ga-enye àgwà ndị a niile n'enweghị mmetụta ọ bụla ọzọ.
Ụrọ Testolone ụra (CAS 1182367-47-0)
Raw RAD140 ntụ ntụ Marketing
Esi zụta RAD140 ntụ ntụ (CAS 1182367-47-0); zụta Testolone ntụ ntụ si AASraw
RAD140 Ntụziaka ntụ ntụ:
Ịzụta RAD140 ntụ ntụ online: 8 eziokwu ị kwesịrị ịma!
Ịzụta RAD140 (Testolone) ntụ ntụ: Gịnị ka RAD140 ji mee?
Zụrụ Testolone ntụ ntụ maka bodybuilding: mmetụta nke RAD140 ị kwesịrị ịma!
2 reviews maka RAD140 (Testolone) ntụ ntụ
RAD140 (Testolone) ntụ ntụ bụ ọgụgụ isi
Nnukwu ọrụ. Ahịa dị mma karịa Irc.bio ma ọ bụ ebe ọ bụla ọzọ m chọtara. Ha na-eme ka ị dị ọhụrụ n'oge ọ bụla nke mbupu. Nnukwu ozi onwe onye. Were ihe karịrị izu abụọ ka ị bịarute. RAD-140 dị ka USD46 / gram na 10 g kachasị ụda ka ị ga-achọ ịzụta ihe n'ọdịnihu !!!